Nkọwapụta Andlọ Ọrụ na Enterprise Culture - Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.
Dongguan Jiankelong Akụrụngwa Co., Ltd.nke pụrụ iche na igwe anaghị agba nchara na emi odude ke Songbaitang Industry Mpaghara nke Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province. Transportgbọ njem ahụ na-adaba adaba ma ọ dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen. Anyị factory ekpuchi 25,000square mita, Ma ọzọ 30,000 square mita osisi bụ n'okpuru ụlọ. Anyị osisi mejupụtara machining ogbako, igwe anaghị agba nchara ngwaahịa ezukọta omumuihe, metal efere ogbako, igwe anaghị agba nchara kabinet ezukọta ogbako, na igwe anaghị agba nchara Ọdịdị ezukọta omumuihe.
Anyị bụ ndị pụrụ iche na igwe anaghị agba nchara balustrade & handrail, grating & igbapu, elu mma metal mgbidi divider & mpempe akwụkwọ metal, igwe anaghị agba nchara brackets maka ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Enwere usoro isii na ọtụtụ puku ngwaahịa. All ngwaahịa ịmụta ọkwa 304 & 316 igwe anaghị agba nchara na dị iche iche imecha izute dị iche iche chọrọ nke ndị ahịa anyị. Ruo ugbu a, ngwaahịa anyị erewo nke ọma ma mara nke ọma na ahịa ụlọ na nke mba ọzọ, gụnyere HongKong, Singapore, Australia, Europe, North America na Middle East.
JKL na-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa nke "na-achọ nlanarị na mma, na-emepe emepe na ihe ọhụrụ, yana ịmepụta nkwekọ na ọrụ". Anyị meriela aha na asambodo nke "China Famous Products", "China Famous Brands", "China Preferred Products for Project Construction", na "National Quality Reeliable Products" .Anweela ezigbo aha, na mmetụta ahụ abawanyela ụbọchị site na ụbọchị. A maara JKL ugbu a dịka "ọkachamara ngwanrọ ngwanrọ nke igwe anaghị agba nchara nke China."
JKL agafeela ISO9001-2015 sistemụ njikwa mma, meriri aha nke ama ama ama na mpaghara Guangdong.JKL bụ otu onye otu Guangzhou Building Decoration Association.
Anyị na-ekwusi ike na mmepe ụlọ ọrụ anyị: ijere ndị ahịa anyị ozi ma tokọọ ọnụ; ịkwanyere ndị na-eweta anyị ùgwù ma rute mmeri-mmeri; ilekọta ndị ọrụ anyị nke ọma na ịkekọrịta ọnụ. Site na-emepe emepe ụlọ ọrụ na omenala, anyị mmepụta na ahịa ọnụ ọgụgụ na-eto eto kwa ụbọchị. Anyị adọtawo ọtụtụ ndị ọkachamara ka ha sonyere ụlọ ọrụ anyị, na ọkwa njikwa anyị na-arịgo na mba ụwa.
Ebumnuche ebumnuche anyị ogologo oge bụ ịbụ ụlọ ọrụ ngwaike kachasị ama ama nke Pearl River Delta ma setịpụ ezi ihe nlereanya maka Counterparts anyị! Site n'usoro azụmaahịa nke ịnye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ kacha mma, iji wuo ọtụtụ ihe eji ewu ewu mbụ.
Nabata JKL ma anyị dị njikere ịkwado gị. Ka anyị mepụta ọdịnihu dị mma karịa together
Igwe anaghị agba nchara Handrail, Handrails, Vetikal Handrail brackets, Nzọụkwụ Aka Aka, Igwe anaghị agba nchara Igwe Mbuliaka Handrail, Handrail Base efere,